पचास प्रतिशत घरमा बिजुली छैन ः तिवारी
By vijayafm on	 June 28, 2017 अन्तरवार्ता, विविध खबर
गैंडाकोट नगरपालिकाका १८ वटा वडामध्ये वडा नम्बर ३ सम्भावना र चुनौती दुवै भएको वडाका रुपमा देखिन्छ । यातायातको सहज पहुँच नहुनु, बिजुली बत्ती नपुग्नु र खानेपानी यहाँका प्रमुख समस्या हुन् । आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ तथा विकास निर्माणका हिसाबले पछाडि परेको नवलपरासीको गैंडाकोट वडा नम्बर ३ मा स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ बाट वडा अध्यक्षमा शिवकान्त तिवारी निर्वाचित हुनुभएको छ । तिवारीसँग वडाको विकासका लागि भावी योजना के छ ? हामीले विजय खबरका लागि तिवारीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ सम्पादक श्रीधर उपाध्यायले गैंडाकोट वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष शिवकान्त तिवारीसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
जनप्रतिनिधि बनेपछि दिनचर्या कसरी बितिरहेका छन् ?
चुनावपछि सम्मान बधाइ अहिले पनि चलिरहेका छन् तिनै कार्यक्रममा व्यस्त छु । नगरपालिकाको कार्यालयमा नै बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यालय जाने आउने गरेको छु ।
वर्षायाम लागेपछि पानी परेपछि वडा नम्बर ३ सँग सम्बन्ध विच्छेदजस्तै छ है ?
हो । यो समस्या ढोडेनीवासीले वर्षेनि भोगिरहेका छौं । यो बाटो राम्रो नहुँदा कति सुत्केरी र सर्पको डसाइबाट मृत्यु पनि हुने गरेको छ । यो बाटो बनाउन थालेको वर्षौ भयो तर काम गरेनन् । यही बाटोका कारण पनि हामी पछाडि परेका हौं भन्ने अनुभूति भइरहेको छ । लामो समयसम्म पनि यो सडक स्तरीकरण हुन नसक्नुलाई कारण के हुन सक्छ ?
हिजो हामी स–साना हुँदा सडक बनाउन आउने डोजर हेर्न जान्थ्यौँ । अहिले म त्यही सडकमा पर्ने क्षेत्रका वडा अध्यक्ष भइसकेँ । कति ढिला भएको छ त्यसले पनि पुष्टि गर्छ । यो राष्ट्रिय गौरवको विषय हो । यो सडक पाल्पा हुँदै चीन जोड्ने सडकका रूपमा विकास गरिदैछ । तर यो सडकमा पर्ने केही रूखहरू काट्न वन मन्त्रालयले अनुमति नदिएका कारण ढिला भएको छ । अहिले यो क्षेत्रमा १७ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने एक हजार बाइसवटा रूख काट्ने मन्त्री परिषद्ले निर्णय त गरेको छ । अहिले वर्षायाम भनेर रोकिएको छ समस्या यही हो ।
खासमा के के समस्या छन् ?
पोहर यही बाटो नबन्दा सर्पले डसेको एक बच्चाको ज्यान गयो । समयमा नै उपचार नपाउँदा उसले ज्यान गुमाउनु प¥यो । त्यसअघि एक सुत्केरी महिलाको ज्यान गयो । बाटो छ गाडी नचल्ने समयमा पु¥याउन सकिएन । दूरीका हिसाबले हेर्ने हो भने राजमार्गबाट हामी ९ किलोमिटरमात्रै टाढा छौं । तर यति धेरै समस्या छ कि केही समय अघिमात्र सोही बाटोका कारण ८ कक्षाभन्दा पढ्न पाइन्नथ्यो । धेरै शिक्षाबाट वञ्चित भए । ८ कक्षाबाट माथि पढ्न गैंडाकोटमा नै डेरा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले यही १० कक्षासम्म पढ्न पाइन्छ । यो बाटोका कारण ढोडेनीवासी आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थको हिसाबले पछि छौं ।
नगरपालिका बनेको पनि तीन वर्ष भइसक्यो किन सोचेअनुरूप विकास हुन सकेनजस्तो लाग्छ ?
गैंडाकोटका अन्य क्षेत्रमा राम्रो बजेट निकासा हुन्छ । तर यो ढोडेनीको विकासका लागि कसैले वास्ता गरेनन् । गैंडाकोट सुगम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले पनि कुरा उठाएनन् ।
पहिले सर्वदलीय संयन्त्र थिए वडा नागरिक मञ्च पनि थिए होइन र ?
भएर के गर्नु तर उनीहरूले पहल नै गरेनन् । हाम्रा कुरा कसैले सुनेनन् । नगरपालिकाको भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो वडा हो । यो र अन्य सबै वडालाई दाँज्ने हो भने बराबर होला तर अहिले पनि यो वडाको हर्दी केलादीमा बिजुली बत्ती पुगेको
छैन । नगरवासीले बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । नगरवासीको अनुभूति हुन पाएको छैन । रतनपुर क्षेत्रमा बत्ती पुगेको छैन। बिजुली पु¥याउन दूरी र लगानीका हिसाबले त्यति धेरै पनि नलाग्ला तर यहाँ गरिदिने कोही भएनन् ।
शिक्षाको अवस्था के छ ?
यहाँको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने वडा नम्बर ३ मा ७ वटा विद्यालय छन् तर एसईई दिएको पहिलोपटक
हो । ढोडेनीमा निजी स्रोतबाट गाउँबाट चन्दा उठाएर मानो उठाएर भए पनि केही प्रयास गरेर १० कक्षा सञ्चालन गर्न सफल भइयो । श्रीकृष्ण गण्डकी बाहेक अन्यमा उच्च शिक्षा सुरु गर्न सकेका छैनौ । शिक्षामा पछाडि पर्दा समग्र गाउँ र देश नै पछाडि पर्दो रहेछ । हरेक हिसाबले हामी पछाडि छौं । ९ किलोमिटरको बाटो नबन्दा शिक्षा, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य समस्या भोग्दै आएका छौं ।
आर्थीक क्षेत्रमा कस्तो समस्या छ ?
ढोडेनी अदुवा र बाख्रापालनका लागि अगाडि छ । तर त्यही बाटोका कारण यहाँ उत्पादित सामग्री बजारसम्म पु¥याउन गाह्रो छ । हिउँदमा त समस्या कम छ तर वर्षायाममा बढी यो समस्या देखिन्छ ।
तपाईं समस्या नै समस्याका बीचमा वडा अध्यक्ष बन्नुभएको छ अहिले खानेपानी समस्या व्यवस्थित गर्न के प्रयास भइरहेको छ ?
ढोडेनी सुख्खा क्षेत्र हो । सिंचाइ त हुने कुरै भएन । चारैतिर नदीले घेरेको छ तर त्यसको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । खानेपानीका टुक्रे मुहान छ तर सामान्य पम्पिङको माध्यमबाट केही पूर्ति गर्ने प्रयास मात्र गरिएको छ । तात्रिबासबाहेक अन्य क्षेत्रमा समस्या नै छ ।
खानेपानीको समस्या समाधानका लागि अब तपाईंले के गर्नुहुन्छ ?
यसका लागि नगरपालिकामा मैले पहिले पनि कुरा गरेको थिए । अहिले पनि गरिरहेको छु । हामी सामान्य उम्मेदवारी दिएर प्रतिनिधि बनिरहँदा सांसदले मन्त्रीले जस्तो तत्कालै गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । तर खानेपानीका लागि आएको बजेट सोही क्षेत्रमा खर्च गर्ने छु । खन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न दिने छैनौं । त्यसका लागि मैले माग पनि गरिहेको छु ।
खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्नुभएको छ ?
हामीसँग मुहान प्रशस्त छ । खानेपानीका लागि समस्या छैन । तर लगानीमात्रै अभाव हो ।
अन्य समस्या के छन् वडा नम्बर ३ मा ?
यी बाहेक पनि धेरै समस्या छन् । गैंडाकोट वडा नम्बर ३ मा ५ वटा मात्रै सामुदायिक वन छन् । तर यो राज्यले हस्तान्तरण गरेको अधिकार नदिएको अवस्था छ । यो सञ्चालन प्रक्रियामा समस्या छ । जंगली जनावरले उस्तै सताउने गरेका छ । चारैतिर जंगलले घेरेको छ । समस्या विविध छन् । चुनौतीका चाङ धेरै छन् । आएको थोरै बजेटले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने पीरले सताउँछ । ठूलो क्षेत्र छ । हिँडेर एउटा वार्डको वल्लो छेउबाट पल्लो छेउ पुग्नमात्रै २ दिन लाग्छ ।
तर त्यसो भनेर उम्कन त मिलेन नि तपाईसँग योजना के छन् यी समस्या चिर्नका लागि ?
गाउँका समस्याहरुलाई पहिचान गरेर प्राथमिकताका आधारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि वार्ड भेला टोल भेला गरेर सङ्कलन गरिरहेका छौं । ती समस्या नगर परिषद्मा पेस गर्नेछौं । नगरले सकेन भने माथि सिफारिस गर्न पहल गर्नेछौं । त्यसका लागि हामीले पहिलो प्राथमिकता बिजुलीलाई नै दिएका छौं । उज्यालो बनाउने अभियानमा नै छौं ।
कति घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुगेको छैन ?
वडा नम्बर तीनमा करिब ९ सय घरधुरी रहेको छन् । तीमध्ये करिब ५० प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको छैन । हर्दीकेलादीको सिंगो वस्तीमा बिजुली पुगेको छैन । साविक रतनपुरको वडा नम्बर तीनमा पुगेको छैन र २ को आधाआधीमा मात्रै पुगेको छ, आधामा भने अझै पुगेको छैन ।
यी सबै काम गर्न वडा कार्यालय पनि छैन, कत्तिको गाह्रो छ ?
गाह्रो छ । उपभोक्ताहरु एउटा सानो सिफारिसका लागि पनि नगरपालिकाको कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा सानो कामले म ढोडेनी रोकिएँ भने पुग्न पनि गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा धेरैको काम बन्दैन । तत्काल पुग्न बाटोको समस्या छ र पुग्न सकिने अवस्था पनि छैन । ९ किलोमिटरको १०० रूपैयाँ तिरेर वडाको काम गर्न जानुपर्ने अवस्था छ । समस्या धेरै छ ।
वडा कार्यालयका विषयमा के सोच्नुभएको छ ?
वडावासीले छिटो वडामा नै गर्नुस् त भन्नुहुन्छ तर हामीले चाहेर पनि भएन केही कानुनी व्यवस्था पनि छ । कर्मचारी व्यवस्था हुनुप¥यो । राज्यले त्यो व्यवस्था गर्नुप¥यो । कोठा भाडामा लिएर काम सुरु गर्न त सकिएला तर कर्मचारी व्यवस्था नहुन्जेल तत्कालै त्यो अवस्था पनि देखिन्न ।
हुन्छ, यहाँलाई यो कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
तपाईंलाई पनि धन्यवाद छ । वडाबासीलाई केही समस्या भए र सहयोग आवश्यक परेका खण्डमा मलाई खबर गर्नुहोला म सक्दो प्रयास गर्ने छु भन्न चाहन्छु । यो अवसर प्रदान गर्नुभएकामा विजय परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ।